Madaxweynaha maamulka Puntland oo ka tacsiyeeyay geerida guddoomiyihii Baarlamaanka dalka Jabuuti – Radio Muqdisho
Madaxweynaha maamulka Puntland oo ka tacsiyeeyay geerida guddoomiyihii Baarlamaanka dalka Jabuuti
Madaxweynaha Dawladda goboleedka Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa Dawladda Jabuuti, Shacabkeeda iyo guud ahaan umadda Soomaaliyeed uga tacsiyeeyey geerida ku timid Allaha unaxariiste Gudoomiyihii Baarlamaanka Dalka Jabuuti Idiris Arnaoud Cali.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Dawladda Jabuuti iyo shacabkeedaba uu la qeybsanayo murugada, waxana uu Alle uga baryey marxuumka in janadiisa Fardowsa uu ka waraabiyo qabrigana u waasiciyo.
‘Allaha u naxariisto marxuumka, samir iyo iimaan buuxana alle haka siiyo qoyskii, asxaabtii iyo weliba shacabka Soomaaliyeed ”Ayuu yiri Madaxweyne Dr.Cabdiweli Gaas.
Dhinaca kale Madaxweynaha Dawladda goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Gaas ayaa sheegay in maamulka Puntland uu aaska qaran uga qeyb gelayo wefti balaaran oo uu hogaaminayo gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Siciid Xasan Shire.
Ku simaha Madaxweynaha ”waa in si deg deg ah loo joojiyaa dagaalada”
Jawaari: sanadka 2016-ka dalka doorasho ayaa lagu qaban doonaa